ढिलो भएपनि आउँछन उनी एकदिन :: NepalPlus
ढिलो भएपनि आउँछन उनी एकदिन
दुरान फर्काएर हो गएको । एघार वर्ष भए । कागज बनाएर आउँछु भनेका छन । लोग्ने बिनाकि बुहारी, कसैसित हाँसेपनि बोलेपनि घरमा रिस गर्छन । दाजुले फोन नगरे पैसा नपठाएपनि नन्द मैमाथि जाइलाग्छिन । छोराले हप्तादिन फोन नगरे सासुपनि शंका काट्छिन । आफ्नो पोईलाई पेवा कमाउन अर्ति दिएकि होली नी ! यसै भन्छन ।
विवाह हुँदा म २२ वर्षकि थिएँ । अहिले त म सात कम दुइ बिसकि भएँ । बल्ल बल्ल भनसुन गरेर माइत हिँडेकि आज । तर आज भाइको छोरा भतिजाको ब्रतबन्ध हो रे । भरे तुतुन्तै फर्कनुछ । देवरको छोरालाई बोर्डिङबाट ल्याउनुपर्छ । चारै बजे आइपुग्नु पर्छ । अस्ति फोन गरेका थिए लोग्नेले । मंसिरसम्ममा आइपुग्छु त भनेका छन । कुन्नी आउनत के गर्लान, त्यसो भन्न थालेको तिन वर्ष भइसक्यो । खै मलाई त पत्यार पनि लाग्न छाड्यो । यहाँ आफुलाई राम्रो लागेको साडी लगाएर हिँडेपनि कुरै काट्छन । लोग्नेले बेल्जियमबाट कमाएर पठाइदिएको छ र खुब लगाउने भएकि छे आदि आदि । आ… किन चाहियो र बेल्जियमकै ? मलाई त यहि घरेलुकै मन पर्छ साडी । चप्पलपनि छिनेका थिए खाली खुट्टामै छु। बैंश त कुनै थाहै नपाइ गइसक्यो के को चप्पल ?चाड पर्व आउँदापनि खुशी लाग्दैन ।
पोहोर साल तिजमा लिन बा आएका थिए। जान दिइनन सासुले । चार वटा त भैंसी छन मेरै थाप्लोमा । कहिलेकाहिँ त घाँस काट्दा काट्दै टोलाएर आफु कहाँ छु थाहै नहुने । सानो भारी देखे सासुको मुखै बांगो हुने । तर मेरो श्रीमानले कमाएर नपठाए यो घरको छाकै टर्दैन । तैपनि म कति हेला भएकि ! सासुपनि महिना महिनामा मेरो कोठामा छिर्छिन छोरोले कन्ना पछाडी केहि पठाएको छ कि यसलाई भनेर । रातीपनि चियो गर्छिन कतै गएकि छ कि भनेर । पानी लिन जाँदापनि कौशीबाट हेर्छिन रे । रोपाईका खेतालातिर हेरेरपनि शंका काट्छिन ।
आखिर के को बन्धन हो मलाइ यस्तो ? म उनको छोराको सपना सजाउन आएकि । आखिर म गोठाली मात्रै भएँ । पल्तिर जयन्द्रसँग के कुरामा हो कुन्नी, म एक दिन हाँसेकि थिएँ। सासुले कुरा लगाइछन । लोग्ने एक महिना बोलेनन मसँग । मलाई पनि त कुरा लगाउनेको ताँती नै छन नी ! खैरिनी च्यापेर बसेका छन रे । तिम्रा मान्छेले भन्छन “खै के हो के हो” । तर अँहँ म त पत्याउन्न । दुरानका भोली पल्टै हिँडेका हुन । मैले त अनुहारपनि कहाँ राम्ररी हेर्न पाएकि थिएँ र ? तर मन त दयालु होला जस्तो लाग्छ । ढिलो भएपनि आउँछन उनी एकदिन।